Wariye Miigane: “Madaxweyne ma is leedahay wax ka duwan dowladihii kaa horreeyey baad qaban kareysaa ama kuu qabsoomaya?” – Balcad.com Teyteyleey
WAREYSIGA SIYAASIGA: Wariye Miigane ayaa kula kulmay guriga Madaxtooyada Madaxweynaha Maxamed Cabdullaahi Farmaajo.
Wariye Miigane ayaa waxaa u suurta gashay inuu weeydiiyo Madaxweynaha su’aalo ku saabsan 100kii maalmood ee uu hoggaanka dalka hayey wixii dhacay, wixii u qabsoomay iyo caqabadihii uu la kulmay .
Wariye Miigane: Mudane maanta waxaad tahay madaxweynaha iyo hoggaanka ugu sarreeya ee Soomaaliya, waxaadna hore usoo qabatay xilka RW adigoo xog ogaal u ahaa xaalka maanta oo markaas ka sii xumaa, hadda adiga ayaa talada dalku kaa go’daa ma is leedahay wax ka duwan dowladihii kaa horreeyey baad qaban kareysaa ama kuu qabsoomaya?
M. Farmaajo: Haa waan qaban karayaa waana qabanayaa, waxaana marag kaaga ah inaan ahay ninka qudha ee dadka oodhami taageereen inyar oo xuma jecel maahine, intaasina waxaan leeyahay hangaraarac lug uma dhutiyo.
Wariye Miigane: Mudane sida aad ogtahay waxaa jirey in dowlad kasta ama cid walba oo cusub dadkeenu xamaasad ku soo dhaweeyaan iyo qiiro muddo kooban, kaddibna hadhoow ay kala noqdaan riyaaqii shalay iyo raynrayntii, waxaa dadku soo wada dhaweeyey, Dowladdii Cabdiqaasim oo magaalada Muqdisho iyo dhammaan gobollada in yar maahine laga taageerey, waxaa la soo dhaweeyey Maxaakiimtii iyo Madaxnimadii Sheekh Shariif laba jeer oo ka miisaan cuslayd taada, waxaa taageero weyn dal iyo dibad loo muujiyey iyo riyaaq Madaxweynihii xilka kugu wareejiyey Madaxweyne Xasan Sheekh Marka taas marka laga yimaado ma jirtaa wax kale oo aad kaga duwan tahay raggii xilka kaaga horreeyey dhaqan iyo waayo aragnimo.
M. Farmaajo: Anigu waxaan ahay dadkuna qireen inaan ahay Madaxweynaha keliya ee dadweynuhu isku raacay, taas waan kaga duwanahay, waxaan kale oo ahay nin la tijaabiyey oo waxqabadkiisa la arkay oo dowladnimada iyo shaqada aan ku cusbeyn haddana sidii iyo ka wanaagsan baan u wadayaa hawsha.
Wariye Miigane: Mudane waxaa jirta inaad tidhi dalkani dowlad ma lahayn ka dambaysay tii Kacaanka 27 sanno, haddana waxaad sheegaysaa inaad dowlad ka soo shaqaysay, adigoo dhammaan quusiyey oo ka saarey meesha in dowlad dalkani yeeshay, bal labadaa arrin isku kay waafaji, Dowlad baa dalku lahaa iyo dowlad dalku ma lahayn.
M. Farmaajo: Haddee kuwo warxuma tashiilaa warkayga qaloociyey warbaahin ku sheegta ayaa si qaldan dadka ugu sheegay, Dowladdi waa jirtaa waana la aqoonsan yahay waana leenahay inkastoo aysan gaadhsiisnayn heerkii shalay aynu ahayn.
Wariye Miigane: Mudane 100kii maalmood ee aad xilka haysay waxaa kugu soo baxay dhammaan dhaliilihii aad u jeedisay xukuumadihii kaa horreeyey, Dhinaca nin jeclaysiga, waxaa lagugu xantaa inaad keliya ku kalsoontahay, beeshaada, Beesha abtiyaasha iyo beesha aad xididka la tahay qofka aan intaas meel ka soo gelina aadan haba yaraatee wax xushmo ah u haynin, sidoo kale waxaad necebtahay qof walba oo ku dhaliila ama aragtidaada ka soo horjeeda oo aad u aragtaa inuusan muwaadin ahayn xaqna u lahayn inuu ka mid noqdo dowladda aad hoggaanka u tahay maxaa ka jira arrintaas?.
M. Farmaajo horta waxaa la yiri: Nimaan Soomaali u talin oo la eedini ma jirto, haddii qofkii aan cugtaba la eegayo, qoyska uu ka soo jeedo ama ka dhalay laguna raadiyo celceliska aniga inta beelood ee xiriirka ila leh, meel lagu badbaadayaa ma jirto, taasi waxay caddeynaysaa inaan Soomaali reer walba la ahay ehel una dhaxeeyo, Mida ah ninka kaa soo horjeeda ma jeclid, taasi been maaha nina ma jecla ninka ka soo horjeeda waayo kan iga soo horjeedaaba ima jecla, balse dalka waa wada leenahay umana diidi karo.
Wariye Miigane: Mudane Madaxweyne, waxaad dowladdii hore ku dhaliishay saddex arrimood, In xukuumadda iyo golaha wasiiradu badnaayeen, taada ayaana hadda ka badan, In Madaxda safarkeedu badnaa, adiga ayaana ka safar batey oo ilaa hadda 9 Safar galay, waxaad ku dhaliishay inaysan ciidanka Mushahar siin, waxaadna tahay Madaxweynaha keliya ee laba jeer ciidanku ku gadoodeen Maxaa is beddelay markaas.
M. Farmaajo: Waa jirtaa inaan iri xukuumaddu waa badnayd iga horreysay een een balse haddana waa dhab waa badan tahay tanise tayo ayay leedahay badideedu waa mid faa’iido leh. Waa jirtaa inaan safaro u baxay balse safaradeydu waa kuwo ka duwan kuwii hore oo ka waxtar badan, waa jirtaa in ciidanku gadoodey, kuwaasi waa iimaan laawayaal doonahaya inay qaranka iyo iftiinka umadda u baxaya dumiyaan, waa kuwii dalka gubey oo naloo qariyey direysna loo galshay, waana ka sifeyn doonaa xeryaha ciidanka waana ka saareyna magac xumadooda ciidanka.
W. Miigane: Mudane waxaa la hayaa muuqaal aad duubtey oo aad leedahay Dowladdaha derisku waa cadowga koobaad ee umadda Soomaaliyeed, haddana Shirkii London waxaad ka sheegtay inay saaxiib dhaw yihiin oo dalka iyo dadkaba difaacaya, markeebaad saxantahay?
M. Farmaajo: Eeen Eeen Eeen, waxaa jira arrimo hadalo aan dhahay waqtiyo hore oo si qaldan loo fahmay, derisku maaha cadow ee waa walaalaheen, waxaan ku saxanahay kelmada dambe ee aan iri, sideedaba qofka oraahdiisa hore waxaa ka saxan tiisa dambe, marka dan ayaa naga dhaxaysa deriska iyo dhammaan dunida oodhan.
Wariye Miigane: Mudane waxaad hore ugu dhaliishay buug aad qortey Madaxweynayaashii hore ee Aadan cadde iyo Cabdirashiid Cali Sharma arke, adigoo ku sheegay inay gumeysiga u shaqayn jireen laguna abaalmariyey Madaxnimo, Madaxdaasi waxay ahaayeen kuwo doorasha shacab ku yimid, codka shacabkana ku noqday Madaxnimo, Midna si dimoqraadi ah ayuu uga degay midna waxaa dilay cadowga umadda Soomaaliyeed dad u adeegaya, haddana waxaad ku dhawaaqday inaad Madaxweyne If you want to save on the buying of your Benicar, you should find someone reliable. We’ve got the best deals, and you can buy your Benicar for 0.64 at our store! Aadan Cadde ku dayaneyso sawirkiisana xafiiskaaga ayaad suratey, marka ma wanaag ayaad kaga dayaneysaa aadan ogeyn? Mise gumeysi raacnimadii aad ku tilmaantey.
M. Farmaajo: Eeen Eeen Eeen Buugga aan Jaamacadda markaan galay qorey, waxaan ku qorey wax badan ma rabo inaad wax iga weydiiso haddii kale waan joojinaya wareysiga.
Wariye Miigane: Mudane waxaa jira tabashooyin badan oo ay bulshadu ka cabaneyso isbedelka dowladda, waxaad dhammaan xilka ka qaaday cid walba oo dowladdi kaa horreysay la soo shaqaysay, miyaanu muwaadinku xaq u lahayn inuu dalkiisa u shaqeeyo dadkiisana u adeego? Mise waa inuu yahay taageerahaaga muhiimada koobaad?
M. Farmaajo: Waxaasi waa war suuqa, qoladiina warbaahintu waxaad tihiin dad xumo sheeg ah, shaqaalaha dowladda anagaa u madax bannaan inaan xulano, kuwa hadda joogaa miyeysan xaq u lahayn inay dalka u adeegaan, waxaad walba rabtaan inaad ka been sheegtaan, dad aan ku kalsoonahay oo aaminasanahay shaqadooda ayaan xulaney, waana hawsha naloo dirsaday.
Wariye Miigane: Mudane waxaa dadku inta badan hadal hayaan saddex arrimood oo xukuumadaada lagu arkay, inaysan ka tacsiyey dilalka iyo qaraxyada, inaysan ka hadal heshiisyada Maamullada dalku galaan, inaysan ka falcelin faragelinta dowladdaha shisheeye, ma idinka siyaasad baa mise waydaan ku baraarugsanayn.
M. Farmaajo: Arrimaha aad sheegtay waxba kama jiraan, waa tacsiyeynaa, dalkuna dowlad ayuu leeyahay cid heshiis geli kartaa ma jirto aan anaga ahayn, teeda kale dowlad faragelin nagu haysaa ma jirto, dalkuna waa xor.
Wariye Miigane: Mudane waxaa jira kacdoon kaa dhan ah oo laba dhinac ah, Mid waa bulshaweynta ku dhaqan gobolka Banaadir oo raadinaya xuquuqda gobolkaas iyo inay helaan matelaadooda dowladda? Midka kalena waa xildhibaano badan oo samaystay urur cusub, sidee u aragtaa labadaa arrimood.
M. Farmaajo: Tan koobaad ma jirto xuquuq ka maqan dadka gobolka banaadir anigaa ka mid ah dadka reer Banaadir, dowladdii baa dhex joogtaa iyagaa majaraha u haya, waana arrin lagu minjo xaabinayo nabadda iyo xasiloonida, dadka wadaana waa qaswadayaal. Xildhibaannada baarlamaanka ee ururku samaystay, maaha hawl noo taal waa dad u adeegaya dad kale waxay naga qaadayaana ma jirto.
Wariye Miigane: Mudane dadka degan gobolka banaadir waa dad aad u badan, dalkuna wuxuu qaatey Federal deegan iyo beelaysi ku dhisan, markaa sidee baysan wax uga maqnayn?
M. Farmaajo: Haddey wax ka maqan yihiin maxay dowladdi hore uga qaadan waayeen, hawshaas waxay kala xaajoonayaan Gudoomiyaha gobolka banaadir iyo xildhibaannada Baarlamaanka ugu jira waxay isku af gartaan ayaan anigu dib u eegis ku samaynayaa, haddii iyagoo isku duuban ay mawqif cad la yimaadaan, sidey rabaan ayaa loo yeelayaa.
Waxaan ku weydiiyey adigu weydiimo xun xun maahine kuwo wanaagsan ma taqaanid miyaa wariye miigane?
Wariye Miigane: Mudane xumaantaa qofba si u yaqaan waxaa laga yaaba inaan ka mid ahay dadka aad u taqaan inay ku neceb yihiin haddii ay aragtidaada ka soo horjeestaan ama saluugaan, waxaadse tahay Masuulkii ugu horreeyey ee dib su’aal ii weydiiya, anigu dalka iyo dadku inuu dhismo oo caddaalad helaan jeclaa mahadsanid madaxweyne.
Halkani waa Radio ku cadde. Barnaamijka wareysiga siyaasiga iyo Wariye Miigane:
Xigasho: Cabdiraxiim H. Galayr